musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Kuwedzera Kwekufamba Kwemigwagwa kweFRAPORT Nhandare
nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • nhau • Dhinda Zviziviso • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Kekutanga kubva pakatanga chirwere checoronavirus, Fraport zvakare yakawana yakanaka Boka mhedzisiro (mambure purofiti) munguva yekuburitsa - ichitsigirwa nekukwira kwekudiwa uye kuderedzwa kwemitengo, pamwe nemubhadharo wedenda kubva kuhurumende.
Fraport Boka Repakati Chirevo - Chekutanga Hafu 2021:
Mune Yekutanga Hafu ya2021, iyo Traffic Inodzoka Zvakajeka kuFRAPORT Ndege /
Nhamba dzevapfuuri dzinokwira mumwaka wekufamba wezhizha - Mitengo yakadzikira zvakanyanya - Fraport inowana yakanaka Boka mhedzisiro nekuda kweimwe-mhedzisiro
Kuita kwebhizimusi kwekambani yendege yeFraport yepasi rose kwakaramba kuchikanganiswa nedenda reCovid-19 mukati memwedzi mitanhatu yekutanga ya2021. Ichitevera kota yekutanga isina kusimba, nhamba dzemumigwagwa dzakasimudzwa zvakare mukota yechipiri ya2021 kudunhu rese reGroup. nhandare pasi rose.
Mutungamiri mukuru weFraport AG, Dr. Stefan Schulte, vakati: Izvi zvinoita kuti tikwanise kuenderera nekudyara kwedu mukuchengetedza kwemamiriro ekunze uye zvirongwa zvekuvandudza zvigadzirwa. Panguva imwecheteyo, takaderedza mitengo yedu zvakanyanya. Nekudaro, yedu yekushandisa mhedzisiro ikozvino yadzoka mune yakasviba zvakare. Zvakare nekutenda kune yedu yakakura uye dzakasiyana nyika dzenhandare yendege Fraport Group iri panzvimbo yakanaka kuti ibatsirwe nekudzoserwa kunotarisirwa mukufamba nendege. "
Yevatakuri traffic inodzoka zvinoonekwa
MunaJune 2021, nhamba dzevapfuuri paFraport's Frankfurt Airport (FRA) imba yekumba yakakwidziridzwa zvakanyanya - ichikwira neanenge mazana maviri muzana gore-ne-gore kune vangangoita mamirioni 200 vafambi. Zviverengero zvekutanga zvinoratidza kuti maitiro aya akaenderera mberi muna Chikunguru, nemigwagwa ichikura neinosvika 1.8 muzana kusvika kune vangangoita mamirioni 116. Traffic yevatakuri veFRA pamazuva ekumusoro parizvino inosvika ingangoita makumi mashanu muzana yezinga rakanyoreswa panguva yepre-denda rekodhi gore ra2.8.
Achitaura nezvemhedzisiro yekukura kwemotokari uye kuwanda kwekushanda panhandare yendege, CEO Schulte akatsanangura kuti: "Kuwedzera kwakanyanya kwemotokari kuri kukonzera matambudziko ekushanda kuFrankfurt Airport, nekuti traffic yakanyanya kuwanda panguva dzinoverengeka dzepamusoro dzezuva. Uye zvakare, iyo yazvino anti-Covid matanho anoda zvakanyanya nguva uye zviwanikwa zvemiitiro yekupedzisira uye mashandiro epasi-ekubata epasi. Tichishanda takabatana nevamwe vedu, tiri kuenderera mberi tichivandudza mashandiro, uku tichigadzirisa masimba edu mukuchinja kuri kudiwa. ”
Kunyangwe paine chimiro chakanaka chakaonekwa mumavhiki mashoma apfuura, FRA ichiri kunyoresa kudzikira kwemotokari kwe 46.6 muzana gore-ne-gore kusvika vangasvika mamirioni 6.5 vafambi kwenguva yese yaNdira-kusvika-Chikumi 2021. Izvi zvinokonzerwa nenyaya yekuti, panguva imwechete yemwedzi mitanhatu gore rapfuura, denda reCovid-19 rakangotanga kukanganisa zvakanyanya traffic kubva pakati paKurume 2020 zvichienda mberi. Zvichienzaniswa nenhamba dzenhamba dzakawanikwa muhafu yekutanga yeganda risati rasvika re2019, FRA yakatonyoresa kudonha kwe80.7 muzana mumigwagwa muhafu yekutanga 2021. -yegore kusvika angangoita mamirioni 27.3 metric matani kubva munaNdira kusvika Chikumi 1.2 (kumusoro 2021 muzana uchienzaniswa nenguva yakafanana mu9.0). KuFraport's Group nhandare pasirese, traffic yakakura zvakare ichionekwa zvakare muna Chikumi 2019, asi huwandu hwese hwehafu yekutanga hwakaramba huri pasi peyakaenzana yegore rapfuura.
Revenue inoderera zvishoma - Yakanaka-imwe-mhedzisiro kubva kuhurumende kubhadhara muripo
Ichiratidza kukura kwese kwe traffic, Fraport's Group mari yakadzikira ne10.9 muzana kusvika € 810.9 mamirioni muhafu yekutanga ya2021. Kugadziridza mari kubva mukuvaka ine chekuita nemari inokwenenzverwa yemari kumabhizimusi eFraport pasirese (zvichibva paIFRIC 12), Mari yemuboka yakaderedzwa ne8.9 muzana kusvika ku € 722.8 mamirioni. "Imwe mari" yaFraport yakavhiringidzwa nechibvumirano chehurumende dzeGerman neHurumende yeHesse kupa Fraport muripo wekuchengetedza kushanda kweFRA panguva yekutanga kukona kwegorona muna 2020. Mari yakakwana yemuripo yemamirioni e159.8 yakave nemhedzisiro inoenderana Boka EBITDA. Fraport inotarisira kugamuchira mubhadharo muhafu yepiri ya2021. Iyi mari inopinda inozove nemhedzisiro kune iyo Boka kushaya mari uye mambure chikwereti chemari.
Zvakare paramende yeGreek yakabvumidza kuripwa kuFraport (pasi pechibvumirano chechibvumirano) chekurasikirwa kwekushanda kwakaitika muna 2020 panhandare nendege dzeGreek gumi nemana nekuda kwedenda. Kunyanya, nyika yeGreek yakabvuma kubvisa mari yakatarwa yemvumo yeFraport, zvichibva pahuwandu hwevatakuri vakagashirwa. Zvakare, Fraport yakapihwa kumbomiswa kwenguva pfupi kwekubhadharwa kwemutengo wekubvumirana. Kwehafu yekutanga ya14, izvi zvakashandurwa kuita zvakanaka mamirioni e € 2021 pane imwe mari yekushandisa yeFraport uye Boka EBITDA.
Uye zvakare, chibvumirano chakasvika mukota yekutanga 2021 pakati peFraport neGerman Federal Police (Bundespolizei) pamubhadharo wezvekuchengetedza nendege services - yakapihwa naFraport munguva yakapfuura - yakagadzira mari inosvika mamirioni e57.8, iyo yakakanganisa Boka EBITDA nemari yakafanana.
Mari dzekushandisa dzakadzikira zvakanyanya - Yakanaka boka mhedzisiro yakawanikwa
Tichifunga nezvekuwanda kwenzira dzemigwagwa, Fraport yakaderedzwa zvishoma-pfupi basa revashandi vanoshanda paFrankfurt Airport (yakaunzwa pasi peGerman Nguva pfupi-basa chirongwa mukupindura denda). Nhandare yezvivakwa yendege isingashandiswe kwenguva pfupi nekuda kwedenda iri rakadzoserwa mukushanda - kusanganisira FRA's Terminal 2. Zvisinei nezviyero izvi zvenguva pfupi yapfuura, Fraport yakanga ichiri kukwanisa kudzikisira mari yekushandisa muFrankfurt kuburikidza neyakaomarara mutengo wekutarisira neinenge 18 muzana muhafu yekutanga. 2021. Kumakambani eGraport akazara-akabatanidzwa emakambani epasirese, mari dzekushandisa dzakadzikiswa neinenge 17 muzana munguva yekuburitsa.
Ichitsigirwa neyemimwe-mhedzisiro kubva pakubhadhara muripo, Boka EBITDA rakasvika 335.3 mamirioni, zvichidarika gore rekutanga-hafu yehafu EBITDA ye € 22.6 mamirioni ne € 312.7 mamirioni. Kusarudzika iyi yakasarudzika-mhedzisiro, iro Boka rakaramba riine chiitiko chinoshanda chekuita muhafu yekutanga ya2021.
Boka EBIT rakasvika € 116.1 miriyoni munguva yekuburitsa, kubva pamamiriyoni ekubvisa 210.2 mamirioni muhafu yekutanga ye2020. Mhedzisiro yemari yekubvisa € 96.2 mamirioni yakaramba iri padanho neiyo imwe hafu yenguva yekutanga gore rapfuura (H1 / 2020: kubvisa € 98.7 mamirioni). Kunyangwe mhedzisiro yezvemari ichibatsirwa nemupiro wakanaka wee € 35 miriyoni kubva kumakambani akasimbiswa kuEquity, izvi hazvingakwanise kudzosera mamirioni makumi matatu nemanomwe emadhora emari yemubereko zvichikonzerwa nezvikwereti zvakawedzerwa zvemari.
Boka EBT rakagadziriswa kuita € 19.9 mamirioni muhafu yekutanga ye2021 (H1 / 2020: kubvisa € 308.9 mamirioni). Mhedzisiro yeboka kana mambure mhindu yakawedzera kusvika ku € 15.4 mamirioni (H1 / 2020: kubvisa € 231.4 mamirioni).
Nekuguma kwehafu yekutanga ya2021, Executive Board yeFraport ichiri kutarisira kuti vafambi vafambe paFrankfurt Airport kubva pamamiriyoni asingasviki makumi maviri kusvika makumi maviri nemashanu pagore rose ra20. Mukuenderana nemaonero apfuura, nhandare dzeGroup muFraport yepasi rose portfolio inotarisirwa kuona yakatowanda traffic traffic kudzora kupfuura Frankfurt. Mari yemuboka ichiri kutarisirwa kusvika inosvika mabhiriyoni maviri emadhora muna 25.
Kubhadharwa kwenjodzi kweanosvika mamirioni zana nemakumi masere emadhora achangopihwa nehurumende yeGerman neHurumende yeHesse haina kuisirwa mumaonero apfuura. Kusanganisira chiitiko ichi, Executive Board ikozvino iri kutarisira Group EBITDA yegore rese kuti itange pakati peanosvika mamirioni e160 kusvika ku € 460 mamirioni (yakadzokororwa kumusoro kubva pakati peanosvika mamirioni e610 kusvika ku € 300 mamirioni, sezvakafanotaurwa muFraport's the 450 Annual Report). Kubhadhara kuchavawo nemhedzisiro yakanaka kuGroup EBIT, iyo yaimbofungidzirwa kuti ichave isina kunaka asi iko zvino yafungidzirwa kuti ichasvika munharaunda yakanaka. Pakutanga zvaifungidzirwa kuve zvisina kunaka, iyo Boka mhedzisiro (mambure purofiti) parizvino inotarisirwa kunge iri muhuwandu kubva pane zvishoma zvisina kunaka kusvika zvishoma zvakanaka.